I-HP yeNtsimbi yeRhasi engenantambo, iVenkile yeHyl yeSinyithi yeRhasi engenantambo, abaVelisi, amaxabiso eMveliso-iBeijing Sinocleansky Technologies Corp.
Ngezixhobo ezikumgangatho wehlabathi kunye nenkqubo yezobuchwepheshe obuphambili, iSinoCleansky inokuvelisa ii-cylinders ezinkulu, eziphakathi, ezincinci, eziphakathi kwe-13.9Mpa-30Mpa kuxinzelelo lomsebenzi, 2L-150L kulwazi lwamanzi. "I-SinoCleansky" iisilinda zensimbi engenazintambo zinomgangatho othembekileyo, isitampu esicacileyo, ukuphakama okungaguquki kunye nembonakalo entle. Isilinda seSinoCleansky sithunyelwe kumazwe angaphezu kwama-40 nakwiindawo kwihlabathi liphela.
Isilinda segesi iSinoCleansky Billet-pierced cylinder yenziwa phantsi komgangatho we-ISO9809. Ukuvunywa kwe-TPED, kunye neengxelo zovavanyo lomntu wesithathu we-TUV.
SinoCleansky ubonelela zonke iintlobo iisilinda zegesi. ISO9809 ityhubhu yombhobho ojikelezwe ngumgangatho ithunyelwe ngokubanzi kwilizwe liphela, kubandakanya uMbindi Mpuma, mpuma Asia Asia, Afrika ...
I-SinoCleansky EN ISO9809 isilinda yegesi yenziwe ngokungqongqo ngokungqinelana ne-EN ISO9809 esemgangathweni, Ukuvunywa kwe-TPED, kunye ne-π uphawu kwisilinda ...
Isilinda segesi iSinoCleansky DOT yenziwa phantsi komgangatho we-DOT-3AA. Esi silinda siqhelekileyo ikakhulu kwimarike yoMzantsi Melika naseMntla Melika, neengxelo zovavanyo lomntu wesithathu ...
I-SinoCleansky ibonelela ngeendlela ezahlukeneyo ze-GB5099 zeesilinda zerhasi. I-GB5099 iisilinda zesinyithi ezisemgangathweni zamkelwe ngokubanzi ngabathengi kwihlabathi liphela, kubandakanya uMbindi Mpuma, mpuma Asia ...